Oromo News 06.17.21 | KWIT
Seerri seera diigu irraa aarrin waaballeesu irrati kan murteessuf fi karaafi cufuun qixxaatidhan akka dabalu himan. Dabalattaan itti gaafatmtoonni himannaa irrati banuufi hin jifachuu baaye akka hin danda’amne himan.
Ittigaaftamtoonni boordi sadihii walgahii ummata eega walitti qaban booda Woodbury County keessati kan jiraattan yero fuldurrati humna projectii qilleensa baasu akka irrati murteesu danda’an himan. Walgahiin gabaa humna kan karoorftani turan irrati kan ibsi kennamu ta’a.
Hasoynii guyyaa sadihiif kibxata seaai booda mana murtii Woodbury County keessati warra boordi keessati beelame qabatanii jiran.
Yaani dhiheefame kan outline bakka tubines ijaaramu hin dandau, kanneen akka bakka conservetion namarraa hanga faana 600 gahutti, bakka qabrii, mana, fi magaala guutu kan dabalatuudha.
State Siouxland sadi dabalatee bakkeewan 10 fi bakka western state ganda baadiyaawan guddina guddaa akka itti fufuuf baankiwan akka laalan himan. Waliigalatti ganda baadiiya mainstreet economic marajjaa isaa 78.8 baaye guddaa June keessa 70 yoo kan gad bu’in harka 50 gad kan tae keessa turani jirani.
Akka Siouxlan martuu gorsa hooa jala jirti , U.S Drought Monitor akka mullisuti State Iowa haala gogiinsa parsantii 40% akka jirtu himan. Kunis gabaasa torbaan darbe irraa kan dabaleedha. Akka state guututi sadi irra afraffaan gogiinsa akka hubamu jiran himan. Woodbury County ammatis haala gogiinsa moderate akka argamaa jiru himan.